ခင်ဦးသာ| November 1, 2012 | Hits:1
snow November 1, 2012 - 6:46 pm အရေးယူထားသောNGOကလူတွေကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တာကိုး..
Reply swe htwe November 2, 2012 - 12:39 am That’s right.
ReplyaNovember 1, 2012 - 6:54 pm ပထမဆုံးရခိုင်အမျိုးသမီးကိုအနိုင်ကျင့်သတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့မွတ်စလင်(၁၀)ယောက်ကိုကားပေါ်ကချပြီးသတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာသတ်သူတွေကဒေသခံတွေမဟုတ်ဖူးလို့သတင်းတွေမှာဖတ်လိုက်ရပါတယ်၊အဲ့ဒါမတိုင်ခင်အောင်သောင်းရဲ့မွေရပ်မြေကလူဆိုးလူမိုက်တွေလည်းရပ်ကွက်ထဲကပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းဖတ်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စဟုတ်မဟုတ်လည်းစစ်ကြပါအုံး၊သတင်းတွေထဲပါတာတောင်မစစ်ဆေးဘူးဆိုတော့တစ်ခုခုများရှိနေလို့လား။(အပြောင်းအလဲလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အရင်နည်းဟောင်း၊အကျင့်ဟောင်းအတိုင်းအတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပုံချတာမျိုးဖြစ်မှာစိုးရိမ်ပါတယ်)တကယ်လုပ်တဲ့သူကိုသာပြတ်ပြတ်သားသားအရေးယူပေးကြပါ။ပြည်သူတွေသိသင့်တဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာပြည်သူတွေမသိရတာကအပြောင်းအလဲဆိုတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်ပါ။
Reply အောင်တင် November 1, 2012 - 7:49 pm အခုတော့ သူတို့ ကြောက်သွားကြလေပြီ – - “ရခိုင်ပဋိပက္ခ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ပါတီ အနေနဲ့ သွေးထိုးလှုံဆော်တာ မရှိပါဘူး၊” (ဦးဖေသန်း – RNDP ဗလိုအလုပ်အမှုဆောင်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလည်)
Reply ဦးညို November 1, 2012 - 8:12 pm ဆင်ချောင် ကြောင်ကြပ် ကျွက်နားရွက်ပြတ် ဥပဒေမဖြစ်ဖို့တော့လိုပါမယ် ဦးသိန်းစိန် ခင်ဗျား
Reply Sun Htun November 1, 2012 - 8:46 pm ဦးဖေသန်း, Do you have census data of Muslims out of Rakhine, those stay along with other ethnic groups without large violence.
Reply Moe Aung November 1, 2012 - 8:58 pm Why did not take actions immediately in June 2012 when the riots started?
Reply ခင်စိုး November 1, 2012 - 9:51 pm ကျွန်တော်ရခိုင် ကိုတခါမှမရေက်ဖူးဘူး
Reply pps12345 November 1, 2012 - 11:18 pm ဒီလို အဖြစ် အပျက်တွေ ဖြစ်လာအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်က လူတွေ၊ နဝတလက်ထက်က လူတွေ၊ ရေတပ်တပ်မှူးတွေ၊ ထောက်လှမ်းရေး ဟောင်းတွေ နှင့် လဝက ဝန်ထမ်းတွေ ကိုကော ပြန်လှန် ဖေါ်ထုတ်ပြီး အရေး ယူပေးဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူးလား သိချင်ပါတယ်။
Reply FOX November 2, 2012 - 10:40 am RNDP ပါတီကိုလုံးဝကိုအယုံအကြည်မရှိပါ… ရှေ့တမျိုးကွယ်ရာတမျိုးကောင်တွေ… အခုမှဒီစကားမျိုးလာပြောနေတယ်… အရင်တုန်းကဖြင့်ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာကိုတောင်မောင်းထုတ်နေတဲ့ပါတီစုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေ…
Reply khun November 2, 2012 - 12:21 pm ဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်သူကို ရခိုင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကုလားဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဗမာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူစေချင်ပါသည်။
Reply နုခင် November 2, 2012 - 2:19 pm ကျမက ကမန်တိုင်းရင်းသား မူဆလင်အစစ်ပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် အဓိကပြဿနာဟာ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ပြဿပါ ဒီဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ုဘက်ကနေ ခေတ်အဆက်ဆက်ခိုးဝင်ပြီးတော့ ရခိုင်ဘက်မှာနေကြတယ် အခု ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေက တိုင်းရင်သားလိုချင်နေကြတယ် နယ်မြေတွေလိုချင်နေကြတယ် ဒီတော့ ရခိုင်တွေဘက်ကလည်း ဘယ်ပေးချင်ပါ့မလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ ရခိုင်လူမျိုးတွေဘက်တရားပါတယ် ကျမတို့ကမန်တွေလည်း ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေကို တိုင်းရင်းသားမပေးချင်ဘူး ဘင်္ဂါလီတွေက တိုင်းတပါးမှာသွားပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားပါဟု လူ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုပြီးလိမ်နေကြတယ် ဒီလိုလိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင်းပြဿနာဖြစ်နေတာပါ။ အမြန်ဆုံး ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့လုပ်ဇတ်ကိုဖေါ်ထုတ်အရေးယူသင့်ပါတယ်။
Reply VCN November 2, 2012 - 2:28 pm သူတို့ကိုသာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးပြီး ပြည်မကြီးဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ရင်တော့ ဒီနိုင်ငံက သူတို့နိုင်ငံဖြစ်သွားမှာပေါ့ သူတို့ကသားပေါက်နှုန်းသိပ်ကောင်းတာ ကပြားလေးတွေထွက်လာမှာပေါ့ ဒါတောင်မသိဘဲ လျှောက်ပြောနေတယ်
Reply ko myatkyi November 5, 2012 - 11:22 am မွတ်ဆလင်တွေဝင်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာ ခွဲထွက်ရေးနဲ့တခြားဘာသာတွေနဲ့မတည့်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေကျပါ ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့NGOတွေကို ဘာကြောင့်ဖမ်းခဲ့ရသလဲ့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ အဲဒီNGOတွေဆီက ဘူးသီတောင်း မောင်းတောကို သီးခြားမွတ်ဆလင်လွတ်မြောက်ရေးနယ်မြေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့စာရွက်စာတမ်းတွေဖမ်းမိလို့လေ ဒါကိုဘယ်သူ့မှမပြောကြပါလား